नेपाल एयरलाइन्सलाई पटकपटक प्र’तिबन्ध किन ? «
नेपाल एयरलाइन्सलाई पटकपटक प्र’तिबन्ध किन ?
प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:००
नेपाल वायुसेवा निगम कोरोना परीक्षणको रिपोर्टका कारण त’नाबमा परेको छ । कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुहरुलाई विभिन्न गन्तव्यमा उडाउँदै आएको निगम हङकङ उडानले बढी स’मस्यामा परेको छ । नेपाल एयरलाइन्स चौथोपटक हङकङको का’रबाहीमा परेको छ । अन्य गन्तव्य मुलुकहरुले पनि निगमलाई प्र’तिबन्ध नै त लगाएका छैनन् तर चे’तावनी भने दिएका छन् ।
एकपटक जापानको नारिता उडानको क्रममा नेपालबाट गएका केही यात्रुमा कोरोना परीक्षण गर्दा पो’जेटिभ देखिएको थियो । सोही कारण जापानले निगमलाई चे’तावनी दिएको थियो । यस्तै दुबईले पनि चे’तावनीस्वरुप निगमलाई पत्र लेखेको थियो । यी गन्तव्यमा निगमले नियमित उडान गरिरहेको छ । तर, हङकङ उडानमा भने पटकपटक प्र’तिबन्धको सिकार नेपाल एयरलाइन्स भइरहेको छ ।
निगम पटकपटक का’रबाहीमा परेपछि सरकारी अस्पतालबाट कोरोना परीक्षण गरेकालाई मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले सरकारी अस्पतालबाटै कोरोना परीक्षण गरेका र रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएका यात्रुमा हङकङ पुगेपछि पनि पुनः परीक्षण गर्दा ‘पो’जेटिभ’ आएको छ । सोही कारण निगम हङकङको प्र’तिबन्धमा परेको हो । निगम प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले हङकङले चौथोपटक प्र’तिबन्ध लगाएको बताइन् ।
उनका अनुसार हङकङले नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्रै उडानमा प्र’तिबन्ध लगाएको नभइ अन्य विमान कम्पनीलाई पनि सोहीअनुसार प्र’तिबन्ध लगाउँदै आएको छ । तर, नेपालमा परीक्षण गर्दा आएको नेगेटिभ रिपोर्ट हङकङमा पुनः परीक्षण गर्दा पो’जेटिभ आउँदा सम’स्या भएको उनले बताइन् । हङकङले एउटा उडानमा तीनजना यात्रुको रिपोर्ट पो’जेटिभ देखियो भने चे’तावनी दिन्छ तर प्र’तिबन्ध लगाउँदैन ।
तर, दोस्रो उडानको समेत जोड्दा ५ वा ५ भन्दा बढी संख्या पुग्यो भने १५ दिन प्र’तिबन्ध लगाउने गर्दछ । नेपाल एयरलाइन्सको हरेक उडानमा ५ जनाभन्दा बढीमा कोरोना पो’जेटिभ देखिएको छ । हङकङले ४ पटक गरी २ महिनासम्म नेपाल एयरलाइन्सलाई उडानमा प्र’तिबन्ध लगाइसकेको छ । निगमले हाल दोहा, दुबई, क्वालालम्पुर, नारिता नियमित उडान गर्दै आएको छ ।
हङकङ पनि निमग नियमित उडान गन्तव्य हो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार हङकङबाहेकका गन्तव्यमा पनि रिर्पोट पो’जेटिभ नै आउने गरेको भए पनि प्रतिबन्ध लगाएका छैनन्, चे’तावनी भने दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई हङकङकले नेपाल एयरलाइन्सलाई पटकपटक प्र’तिबन्ध लगाएको विषयमा सम्बन्धित देशको राजदूतसँग कुरा गरिरहेको बताए ।
“सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिइयो तर त्यसमा पनि कैफियता देखिएकाले यस विषयमा दूतावाससँग नियमित रुपमा कुरा भइरहेको छ तर उता (हङकङ) बाट निर्णय आइसकेको छैन,” उनले भने । कोरोना परीक्षण गरिसकेपछि यात्रु संयमित भएर नबसिदिँदा यस्तो स’मस्या आएको उनले बताए । उनले परीक्षण गर्ने मेसिनका कारण पनि रिपोर्ट फरक फरक आउन सक्ने बताए ।
“यहाँको मेसिनले एउटा र त्यहाँको मेसिनले अर्को देखाएको प्राविधिक कुरा पनि हुन सक्छन्,” भट्टराईले भने । यता, हिमालय एयरलाइन्सले भने अहिलेसम्म कुनै का’रबाहीमा नपरेको जनाएको छ । हिमालय एयरलाइन्सले ५ वटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । तर, उसको उडानमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै स’मस्या देखिएको छैन ।
हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ अहिलेसम्मको उडानमा कुनै स’मस्या नआएको बताए । हिमालयले कतारको दोहा, साउदी अरेबियाको दमाम, मलेसियाको क्वालालम्पुर, चीनको चङचिङ, यूनाइटेड अबर इमिरेट्सको अबुधावीमा नियमित उडान गरिरहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपालबाट जाने यात्रु निकै कम भए पनि उताबाट आउने यात्रुको संख्या भने राम्रै छ ।